Gargaarka bulshada ee Afrika ayaa hoos u dhacay 4% 2018 - TELES RELAY
ACCUEIL » International »Gargaarka bulshada ee Afrika ayaa hoos u dhacay 4% 2018
Farqiga labada dhinac ee Faransiiska ah ee qaaradda ayaa sidoo kale hoos u dhacaya, sida laga soo xigtay tirokoobyada OECD.
Par Laurence Caramel Ku qor maanta 15h37
Beeraley ayaa ka shaqeeya beertiisa agagaarka tuulada Botor, Somaliland, bishii April 2016. Siegfried Modola / REUTERS
The gargaarka rasmiga ah Africa laba geesood ah hoos 4 2018%, sida ka muuqata tirokoobyada Ururka dhaqaalaha Iskaashiga iyo Horumarinta (OECD) sii daayay Arbacadii 10 April. Waxay gaadhay 29,7 billion (oo ku saabsan 26,4 bilyan), sida ay aqoonsi ay Guddiga gargaarka horumarinta ee OECD (DAC), kaas oo sannad walba qiimeeyaan dadaal midnimo ah by dalalka warshadaha dhigay . "Gargaarka gargaarku wuxuu aadaa dalalka ugu khatarsan horumarka iyo dalalka Afrika, halkaas oo loo baahan yahay ugu badnaan. Tani waa mid dhib badan, Susanna Moorehead, Madaxweynaha DAC, ayaa shir jaraa'id oo ka sheegay Xarunta xarunta ee Paris.
Sidoo kale akhri Afrika, malab waa arrin horumar ah
Wadarta gargaarka horumarinta rasmiga ah (ODA) ee wadamada iyo hay'adaha caalamiga ayaa gaaray 149,3 bilyan, oo ay hoos u dhigtay 2,7% oo ka timid 2017. Isbeddelkani waxa lagu sharxayaa hoos u dhaca xaddiga lacagta lagu qaato qaxootiga iyadoo loo marayo wadamada deeqda bixiya. Kuwaas waxaa lagu xisaabtamayaa ODA. Qiyaasta bilyan ee 10,6, waxay ku dhaceen ku dhawaad ​​30% sanadkii hore. Gargaarka bani'aadamnimada, oo Africa ay ka mid tahay meelaha ugu muhiimsan, ayaa sidoo kale hoos u dhacaya (- 8%).
Haddii France ayaa ka mid ah dalalka kuwaas oo guud ahaan ODA ayaa kor u 2018 (+ 4,4% in 12,5 billion), u ogolaanin in ay u sii dalka deeq shanaad, waxa aanu u leeyihiin in ay sub-Sahara Africa. Sida laga soo xigtay OECD, "Lacagta ikhtiyaariga ah wax yar ayay hoos u dhacdey 1%.
Tirooyinkani waxay muujinayaan in ballan-qaadyada ay sameeyeen xukuumadda Faransiisku ay kordhinayso maal-galinteeda dhaqaale ee qaaradda si aad u xoogan aan weli dhab aheyn. Xilligan la joogo, sida dib loo soo celiyay Rémy Rioux, agaasimaha Hay'adda Horumarinta Faransiiska (AFD, Afrika of 2015 in 2018), faalloonaya natiijada sanadlaha ah ee hay'ad maaliyadeed aroortii Arbacada, mudnaanta dawladda ku muuqata in amar ka go'an ah 1 billion in lacag dheeraad ah si ay u Africa in 2019. Waxa aan ahaa ilaa April 2020 si aad u aragto haddii lacagta loo gaaro dantii iyo waxaa laga garan karaa in warbixinta OECD.
Sidoo kale akhri Paris waxay ku hawlan tahay in ay wax badan ka qabato gargaarka horumarinta
Kuwa ka mid ah deeq bixiyeyaasha ugu badan, Maraykanka, Ingiriiska, Spain iyo Talyaaniga ayaa sidoo kale hoos u dhigay qarashkooda gargaarka ee qaaradda.
Tirooyinkan hordhac ah ee ka imanaya OECD ma sheegi karaan waddamada ay qaadanayaan kharashka ka bixitaankaan. Hay'addu waxay sidoo kale bilowday inay codsato dib-u-habeynta xisaab-celinta 2014 ay qaateen xubnaha DAC. Habkani cusub wuxuu jecel yahay gargaarka lagu bixiyo deeqda iyo, liddi ku ah, wuxuu yareeyaa waxa hore u ahaa amaahda. "Waa hab sax ah oo hufan oo lagu cabbiro dadaalka deeq-bixiyeyaasha. Waxaa sidoo kale loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo deeq-bixiyeyaasha si ay u siiyaan deynta ugu badan [heerka dulsaarka hoose] iyo deeqda ugu badan ee dalalka u baahan ugu badnaan, " ayaa sheegay in Mme Moorehead.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/04/10/l-aide-publique-a-l-afrique-a-baisse-de-4-en-2018_5448406_3212.html?xtmc=afrique&xtcr=1